Layaab: Weli ma aragtay waalidan oo kale ciyaaryahan caan ah oo garoon soo galay isaga oo. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Layaab: Weli ma aragtay waalidan oo kale ciyaaryahan caan ah oo garoon soo galay isaga oo.
Layaab: Weli ma aragtay waalidan oo kale ciyaaryahan caan ah oo garoon soo galay isaga oo.
Waxaa Qoray: Cabdu Wahaab Axmed Cali /////////// Taariikh: 3-09-16 3:12 PM Kubada cagta waxaa mamnuuc ka ah in xiddigu is qaawiyo ama uu muujiyo qeyb Cawradiisa, halyeeygii hore ee xulka Denmark Lars Elstrup misana ahaa mid kamid ah xiddigihii ku guuleeystay tartankii Euro xilli ciyaareedkii 1994 ayaa lagu marti qaaday ciyaar maxali ahayd oo u dhaxeysay kooxaha reer Denmark ee kala ah Randers iyo Silkeborg.
Intii lagu gudda jiray qeybtii labaad ee ciyaarta Elstrup ayaa soo galay ciyaarta isagoon wadan wax dhar ah kuna soo dhex cararay guddaha garoonka ay ciyaartu kasocotay.
Falkaan ayaa sababay in la hakiyo ciyaarta daqiiqado ilaa ay ka bixinayaa sakiisha amaanka garoonka xiddigan reer Danish, balse 53 sano jirkaan ayaa xilli dambe ka bixiyay raali galin, inkastoo xiddigan aanay ahayn wax ku cusub sheekoyinka ceynkan oo kale.
Xiddigan ayaa horaan u sameyay fal nuucaan oo kale, isagoona isku qaawiya meelaha bulshada iskugu timaado, balse horaan ayuu helay digniino waa wayn taas oo ah inuusan sameyn falalka isqaawinta ah.
Weeraryahankii hore ee kooxda Feyenoord ayaa ciyaaraha ka fadhiistay isagoo jira 30 sano, islamarkaana waxaa uu ku biiray dariiqada bidcada ah ee Kirishtanka isagoo ugu dambeyn magaciisa u badalay Darando, sidaa darteeda “waxaa uu mar waliba isku dayaa in uu carqaladeeyo Imaanka dadka Kirishtaanka” waxaa sidaas kusoo qoray bartiisa Twitter ka mid kamid ah taageerayaashii garoonka usoo daawashada tagay.